नाम राखौं « News of Nepal
जसको पार्टीको संगठन र नीति काम न काजको छ त्यस्तालाई अहिले निर्वाचन निल्नु न ओकल्नुभएको छ। निर्वाचनको विरोध जसले गरेका छन् तिनका पार्टीमा मान्छे हेर्यो भने अधिकांश बाबु आमा, छोरा, छोरी, पत्नी, पति, ज्वाइँ, साला–साली यस्तै मात्रै छन्।
यतिले मात्रै त निर्वाचनमा जित्न कठिन हुन्छ। अनि कसरी निर्वाचन होस् भन्नु? बरु अहिले टाउको मात्रै भए पनि यसो चिनिएको छ। बेलाबेलामा मिडियामा छाउन पनि पाइएको छ। हल्ला गर्न पाइएको छ। भोलि निर्वाचनमा ५⁄७ मत मात्रै आयो भने त हुनु बेइज्जत हुन्छ। त्यसपछि कसैले पुछ्नेवाला पनि छैन। त्यही भएर अहिलेलाई निर्वाचन स्थगित गरौं भनेर वक्तव्य जारी गर्यो सकियो। निर्वाचन बहिस्कार गरौं भन्ने दलहरूका अहिलेका टाउका गनौं त पाठकवृन्द? दुनियाँमा कहीं निर्वाचन बहिस्कार गरौं भन्ने तर्क पनि हुन्छ। निर्वाचन भनेको जनताले
चुन्ने व्यवस्था हो।
जनताको मन जित्ने नीति र नेतृत्व लिएर हिँड्ने हो भने त आवधिक निर्वाचन चाँडोभन्दा चाँडो गराऊ भनेर पो नाराबाजी गर्नुपर्ने हो। तर, हाम्रो देशमा त २० वर्षमा पनि निर्वाचन नगराऊ भन्ने माग पो गुन्जिन्छ वा। पाठकवृन्दले निर्वाचनमा ख्याल गर्नुहोला है। क–कसलाई डाँडा कटाउनुपर्ने बेला भयो
हुनत यहाँ जनताले खतरनाक निर्णय लेलान् भनेर निर्वाचन नै हुन नदिने तिर धेरै छोटे राजाहरू छन् र सरकारले पनि यसो देखाइदिऔं भनेर मात्रै निर्वाचनको तिथि घोषणा गरेको भन्ने पनि कुरा आइरहेको छ। त्यसैले होसियारी अपनाउन पाठकवृन्दलाई विशेष आग्रह है। जनताको पक्षमा काम गर्छु भन्ने दलले पनि चुनाव हुन्न भन्यो भने त त्यसलाई संसारमा नै ‘फटाहा भन्छन्। हामीले कसरी बुझ्ने हो आफैं बुझौं र नाम राखौं है।